आफ्नो समयको व्यवसथापन कसरी गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा हाकिमहरूलाई थाहा हुन्छ । उनीहरू समयलाई व्यर्थमा खर्चिंदैनन् । समयको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे उनीहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ थिचिएको महसूस भएर त कहिले रुचि हराएर हामी आफूले गर्नुपर्ने काममा एकाग्र हुन सक्दैनौं । तर, यसलाई चिरेर अगाडि कसरी बढ्ने अनि आफ्नो भूमिकालाई राम्ररी निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा हाकिमहरूले राम्ररी बुझेका हुन्छन् । उनीहरूको कार्यशैली पछ्याएर आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ? हाकिमहरूले समय व्यवस्थापनका लागि अपनाउने ६ तरीका यहाँ दिइएको छ :
आफूले गर्ने कामको सूची बनाउने
कामको सूची बनाउँदा आफूले के गर्नुपर्ने रहेछ, अनि केमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गर्न मद्दत मिल्छ । एउटा काम सम्पन्न भएपछि त्यसमा चिह्न लगाएर राख्नुहोस् । अनि अर्को काम थाल्न सकिन्छ । सूची बनाएर राख्दा कुनै काम छुट्ला वा दोहोरिएला भन्ने चिन्ता हुँदैन ।
एक पटकमा एउटै काममा ध्यान लगाउने
कसैको बानी नै हुन्छ, एउटा काम गरिरहेको बेलामा अर्कोको बारेमा सोच्ने । यसो गर्दा गरिरहेको काममा ध्यान लगाउन सकिँदैन । काम नै बिग्रने डर हुन्छ । त्यसैले जुनसुकै काम गर्दा पनि एकपटकमा एउटैमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अनि मात्रै अरू काममा लाग्नुपर्छ । कुनै बेला हाम्रो दिमागमा फ्याट्ट केही विचार आयो भने यसले भुलाउँछ । तर, यस्ता विचारलाई चाहिँ खेर फाल्नु हुँदैन ।
सर्वाधिक उत्पादनशील समय पहिचान गर्ने र त्यसलाई कामका लागि छुट्ट्याउने
कोही मानिस बिहान धेरै उत्पादनशील हुन्छन् अनि कोही साँझमा । तपाईंलाई पनि कार्यालय आउने बित्तिकै उत्पादनशील भएको जस्तो लाग्छ कि साँझमा सहकर्मीहरू घर गइसकेपछि एकान्तमा ? आफू कति बेला सर्वाधिक उत्पादनशील हुन्छु भन्ने थाहा भयो भने महत्त्वपूर्ण काममा एकाग्र भएर काम फत्ते गर्न सकिन्छ । सानातिना अनि पट्यार लाग्दा काम भने अरू समयमा गर्न सकिन्छ ।
आफूले गर्ने सबै काममा रुचि छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने
हामी आफूलाई रुचि भएको काम मात्रै गर्दैनौं । कहिलेकाहीँ इच्छै नभएको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । रुचि नभएका काम गर्न अलि गाह्रो हुन्छ । काम सधैं रुचिपूर्ण, रमाइलो वा चुनौतीपूर्ण हुँदैन । काम रमाइलो मानेर गरिरहेको भनेर तलब पाइने होइन । वास्तविकता के हो भने आफूले जिम्मा लिएको काम मन लगाएर राम्ररी सम्पन्न गर्नैपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहोस् । यो जुनसुकै पेशाको हिस्सा हो । हाकिमहरूले पनि यस्तै गर्छन् ।
आफूलाई रुचि नलाग्ने काम अरूलाई सुम्पने
आफूसँग कामको चाप धेरै भएको बेलामा एक/दुईओटा काम अरूलाई सुम्पन सकिन्छ । कुनै परियोजनामा सीधै रिपोर्ट दिन भन्ने वा कामको कुनै पक्षमा अरूको सहयोग माग्नेबारे सोच्न सकिन्छ । सबै काम आफैले गर्नुपर्दैन । के काममा अरूको मद्दत लिन सकिन्छ, कुन चाहिँ अरूलाई गर्न दिन सकिन्छ सूची बनाउनुहोस् । जस्तै– ‘प्रूफ रिडिङ’ गर्न अल्छी लाग्छ भने केही पेज आफ्ना सहकर्मीलाई हेर भन्न सकिन्छ । बाँकी पेज आफूले हेर्दा पनि हुन्छ ।
अहिले गर्ने कि पछि भनेर आफैलाई प्रश्न गर्ने
कतिपय मानिसमा जुन काम पनि समय घर्किसकेपछि गर्ने बानी हुन्छ । काम बेलामै सम्पन्न गरिएन भने असहज समय अनि हतारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो बानीले व्यक्तिगत समय बर्वाद गरिदिन्छ अनि मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पु¥याउन सक्छ । काम यस्तो अवस्थामा पूरा गर्नुभन्दा अहिले नै एकाग्र भएर गर्नु नै ठीक हो ।